प्रियङ्काको वैवाहिक समारोह किन पऱ्यो विवादमा ? पशु-अधिकारवादीद्वारा चिन्ता प्रकट | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रियङ्काको वैवाहिक समारोह किन पऱ्यो विवादमा ? पशु-अधिकारवादीद्वारा चिन्ता प्रकट
प्रकाशित मिति १८ मंसिर २०७५, मंगलवार २३:५९ लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । बलिउड स्टार प्रियङ्का चोपडा र अमेरिकी गायक निक जोनासबीचको वैवाहिक सम्बन्ध यतिबेला निकै चर्चामा छ । प्रियङ्का जस्ती सुन्दरी एवम् लोकप्रिय अभिनेत्रीको विवाहको चर्चा हुनु कुनै अनौठो विषयचाहिँ होइन, र उमेरले आफूभन्दा करिव १० वर्ष जुनियर युवकसँग बिहे गरेको कारण उनी चर्चामा रहेकी पनि होइनन् ।
काठमाडाैं । वासस्थान र आहाराको खोजीमा भारत पुगेका नेपालका बाघ नफिर्ने पाइएको छ । सीमा वरपरका संरक्षण क्षेत्रमा भारतीय…
अब यसरी बित्नेछ सलमान खानको जेल दैनिकी (२४ घन्टे रुटिन सहित)
काठमाडौँ । भारतको जोधपुर कोर्टले सलमान खानलाई कृष्णसार (कालो हरिण) शिकार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच बर्ष कैद सजाय…
सुन तस्करी आरोपमा फरार आरोपी छिरिङ वाङ्गेलले गरे आत्मसमर्पण
विराटनगर । सुन तस्करी मुद्दाका फरार आरोपी छिरिङ वाङ्गेल घलेले जिल्ला अदालत मोरङसमक्ष आइतबार आत्मसमर्पण गरेका छन् । कार्यालय…
विषाक्त रक्सी प्रकरण : मलेसियामा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ८ पुग्यो
मलेसिया । मलेसियामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ८ पुगेको छ । यसअघि विषाक्त मदिरा सेवनबाट ६…
बसपार्क क्षेत्रका होटल तथा रेष्टुरेष्टमा प्रहरीको छापा, ३९ जना पक्राउ
काठमाडौं । बसपार्क क्षेत्रका होटल तथा रेष्टुरेष्टमा प्रहरीले आइतबार साँझ छापा मारेको छ। प्रहरीले होटल तथा रेष्टुरेष्टमा शंकास्पद गतिविधि गर्ने ३९…
​नेकपा नेतृसँग मिलेर ‘सेनानी’को ठगी धन्दा 379 views
माझखण्डलाई किनेर मालामाल हुने दाउ ! 40 views
सक्कली कम्पनी, नक्कली विमा, अरुको नागरिकताबाट ६८ करोड ठगी 32 views